भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा नेकपा नेता प्रभु साहसँग स्पष्टीकरण माग ! - Yatra Daily
Home राजनीति भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा नेकपा नेता प्रभु साहसँग स्पष्टीकरण माग !
भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा नेकपा नेता प्रभु साहसँग स्पष्टीकरण माग !
वीरगन्ज १३ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रभु साहले भ्रष्टाचारको विरोधमा आवाज उठाएपछि पार्टी सचिवालयले स्पष्टीकरण मागेको छ ।
फागुन १० गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टी एकता पछि हालसम्मकै पहिलो स्पष्टीकरणको पत्र प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्षसमेत रहेका प्रभु साहलाई काटिएको हो । गत माघ २६ गते नेता साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय हास्यास्पद भएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।
उनले प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुने तर भ्रष्टाचार गरे कानुन नलाग्ने व्यवस्था गलत भएको भन्दै आलोचना गरेपछि उक्त विषय नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रवेश भएको थियो ।
एक जना सचिवालय सदस्यका अनुसार नेता साहको स्टाटस वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालप्रति लक्षित रहेको तथा त्यसबाट नेता नेपालको अपमान भएको पार्टी सचिवालयको ठहर छ ।
सचिवालय बैठकमा यस विषयमा लामो चर्चा समेत भएको थियो । सचिवालय बैठकमा एक नेताले प्रभु साहको बचाउ पनि गर्न खोजेका थिए । पार्टीका नेताप्रति लक्षित नभइ नेता साहले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाएको तर्क गरे पनि सचिवालयका अधिकांश सदस्यले यसलाई गलत ठहर गरेका थिए ।
सचिवालयले नेता साहलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ‘तपाईले पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड माधव नेपालका विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालमार्फत अनुचित र आधारहीन आरोप लगाउनुको कारण के हो ?, तपाईंलाई पार्टीले किन कारबाही नगर्ने ?’
नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “प्रभु कमरेडले भ्रष्टाचार, वेथितिको विरुद्ध बोल्नु भएको हो । उहाँले न्याय प्रणालीले गलत गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बक्सिनुहँदैन भन्ने कुराको उठान गर्नुभएको हो । त्यो एकदम सही हो र हामी त्यसको समर्थन गर्छौँ । तर भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेतालाई स्पष्टीकरण माग्नुको सट्टा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नेलाई किन विरोध गरिस् भनेर प्रश्न सोध्नु गलत हो । हामी यसको विरुद्धमा पार्टीमा आवाज उठाउछौँ ।“
नेता साहले भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा स्पष्टिकरण माग गरिएपछि यी प्रश्न नेकपाका नेता तर्फ सोझिएको नेकपाकै नेता कार्यकर्ताहरु बताउँछन् ।
नेकपालाई सोध्नु पर्ने प्रश्न ?
१) के एउटा जनप्रतिनिधिले अख्तियारको निस्पक्षताबारे प्रश्न गर्न पाउँदैन ?
२.) गोकुल बास्कोटा काण्ड, भीम रावल र सूर्य थापाका विषयमा केही नबोल्ने, तर भ्रष्टाचार बिरुद्ध निस्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ भन्दा प्रभु साहलाई किन स्पष्टीकरण ?
३) के नेकपाले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ ?
४) आफ्नै पार्टीको सांसदको आवाज दबाउन खोज्ने पार्टीले प्रतीपक्षको कुरा के सुन्छ ?
५) के नेकपाले निरंकुशताको अभ्यास गर्दैछ ?
Previous articleप्रदेश २ अध्यात्मको राजधानी हो : मनिष झा
Next articleसहारा एकेडेमीलाई बार्षिक ५ लाख दिने गरी रातो कितावमै पाछौं मन्त्री सुनार